Dhibbisaafi Kuullee – siifsiin
Battalumattin waa yaadadhe. Edaa har’a galgala Kuullee loluun narra hin turre. Sababnisaa bor ganama beellama baay’ee barbaachisaan qaba. Akka amalaa ta’ee garuu ganama ganama ka’uu hindanda’u. Kun dhimma uumamaati. Yeroo hundumaa ganama barii yoon beellama qabaadhe hirribaa kan na dammaqsu isheedha. Isheen gama kanaan qaxaleedha. Amma egaa maal naaf wayya? Akkan itti hin himanne walcufneerra. Walitti hin dubbannu. Akkamittan barii halkan akka na dammaqsitu itti himadhaa? Maalumaafan ishee lole? Maalta’a mucichi waanumasheen barbaaddu utuu ta’ee?
Facebook: Eebbisaa Baayisaa
Previous Previous post: Hunduu haa Barannuu
Next Next post: Seenaa Oromoo Raayyaa